Legos no Entin’ny Dispatch Beirut ‘Manarina Indray’ Ireo Ampahany Simba sy Tsy Noraharahiana Tao an-tanàna · Global Voices teny Malagasy
Legos no Entin'ny Dispatch Beirut ‘Manarina Indray’ Ireo Ampahany Simba sy Tsy Noraharahiana Tao an-tanàna
Voadika ny 08 Febroary 2017 1:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, عربي, Français, 日本語, 繁體中文, English
Fametrahana taokanto tao amin'ny Arabe Geitawi, Beirut. Sary nalaina ny 28 Martsa 2013. Loharano: Facebook.
Nametraka ny anarany ny Dispatch Beirut , vondrona Libaney mpanao taokanto ho an'ny daholobe tamin'ny fampiasàna Lego ho fomba iray “hanorenana indray” ireo singa ao an-drenivohitra .
Ireny “biriky kelin'ny fanantenana” ireny, araka ny iantsoan'ilay vondrona azy, dia natao ho eo mandritry ny fotoana mandalo ihany. Raha ny filazan-dry zareo azy manokana, irian'ny Dispatch Beirut ny “hanamarika an'i Beirut aminà taokanto mandalo fotsiny ihany nefa misy asa famoronana ho toy ny endrika iray amin'ireo fanambaràna an-tanandehibe momba ireo toerana rotidrotika sy tsy raharahiana amin'izao fotoana izao.”
Lea Tasso sy Pamela Haydamous no nanorina ny Dispatch Beirut , aingam-panahy nateraky ny asan'ilay Alemàna Van Jormann, mpanakanto nampiasa ny singa plastika ho amin'ny asa fanorenana hitsaboana sy hamenoana ireo lavaka banga tamin'ireo rindrina loaka.
Ny tosika lehibe indrindra ao an-damosin'ity fandraisana andraikitra ity dia ny fahatsapàna fa ny fitadiavana tombontsoa no nomen'ny governemanta vaàna tamin'ny fanarenana ny tanàna fa tsy ny lova, taorian'ny nifaranan'ilay ady an-trano naharitra 15 taona tamin'ny 1990. Tamin'ny 2010, ireo manampahaizana, Marwan Ghandour sy Mona Fawaz dia nanoratra hoe raha ilay “fanasitranana” nambara ho antony nanosika tao an-damosin'ny asa fanorenana, dia “nisy nifandraisany kely tamin'ny fotoana fanomanana ny fandravàna ilay izy fa tsy ny hetsika tena fandravàna”. Amin'ny fiteny hafa, “ny famongorana toerana vokatry ny fandravàna avy amin'ny ady dia vao mainka nohamafisin'ny asa fanarenana taorian'ny ady”.
Mila valiny ara-javakanto io, ary nirian'ny Dispatch Beirut ny hanefa ny anjarany. Raha niresaka tamin'ny Global Voices, Haydamous nanazava hoe :
Lasa aloky ny lasany sisa i Beirut ary tianay hovàna izany. Tianay homena aina vao indray ireo lavaky ny balan-tafondro eto Beirut, ireo tohatra sy arabe, amin'ny endrika mahafinaritra. Tianay homena vintana hahatsiaro ny fahazazany sy ny lasany ny olona, amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo indray ny fahatsapàna fanantenana izay verin-dry zareo teo am-pitomboana nandritry ny ady. Nomenay bolonganà legos ry zareo ary nangatahanay mba hanangana ny tontolon'izy ireo miaraka aminay.
Vetivety dia lasa nazava tamin'ny tarika fa tsy maintsy hianjadian'ny fomba fitondra napetraka ao amin'ny tanàna ny asan'izy ireo.
Fantatray fa tsy hanam-bintana ny hijanona mandrakizay tsy ho voakitika eo ny taonkanto an-dalmbe nataonay. Famotehana betsaka no efa nantrehanay. Tsy nanampy rahateo ny governemanta. Fony izahay nanorina ny nataonay ho an'ny Andro Fankalazana ny Fahaleovantena teo amin'ny rindrina iray rava, nahazo fahazoandàlana voasonia izahay mba hahafahan'ny zavatra nataonay hijanona eo mandritry ny volana iray manontolo. Ora 12 monja taorian'izay, nahazo antso an-telafaona izahay nilaza hoe niteraka fanoherana marobe ilay asa nataonay ka noho izany dia tsy maintsy horavàna. Tena mahaketraka ny mandre izany. Tsy mifanalavitra amin'ny hoe efa lasa zatra mahita hadisoam-panantenana ny vahoaka.
Fanorenana ho an'ny Andron'ny Fahaleovantena Libaney. 22 Novambra 2012. Loharano: Facebook
Mandany fotoana sy ezaka betsaka ny famoronana itony asa safatsiroa itony. Tamin'ny fangatahana ireo namany sy olom-pantatra mba hanao fanomezana, nahavita nahazo legos ny tarika mba hanohanana ny asan'izy ireo, ho fanoloana ny fomba fanaon-dry zareo hatramin'izay. Saingy tsy naharitra ihany koa izany. Hoy i Haydamous tamin'ny Global Voices:
Nanomboka tamin'ny fampiasàna ny biriky avy aminay manokana izahay ary nahazo fanomezana avy aminà namana, naman'ny namana, dia tahaka izany hatrany. Tamin'ny fotoana nanaovanay ny fametrahana ny asa fahefatra nataonay, nanampy manontolo anay ny Lego Beirut. Roa taona taty aoriana, nitsahatra ny fanampiany satria nànana olana tamin'ny fiarovana ny asanay izahay. Miverina mahazo fanomezana izahay ankehitriny. Antenainay ny haita endrika vaovao hanaovana firotsahana an-tsehatra eny an-tanandehibe izay mba hijanona fotoana maharitra kokoa.
Ny asa fahefatranataon'ny Dispatch Beirut. Loharano: Facebook
Na niatrika olana tamin'ireo asa nataony aza, tsy nahasakana ny asan'ny tarika tsy hahazo fifantohana izany. Tamin'ny 2013, niaraka niasa tamin'ny fetibe “Geitawi on my mind”sy ny tarika”Dihzahyners”ny Dispatch Beirut mba hanangana tetikasa iray antsoina hoe “Tanàna Kely iray Hafakely / Mahagaga” izay nanatsaràn'izy ireo trano tranainy iray tao amin'ny iray amin'ireo faritra be mpivezivezy indrindra ao Geitawi, Beirut, tamin'ny alàlan'ny loko isankarazany sy Legos.
Ireto ny sary taloha sy taorian'izany:
Sary taloha sy taoriana, ahitàna ny ‘Tanàna Kely iray Hafakely’. Loharano: Bananapook
Raha andrana ho famafàna ny lasa no ahitàn'ny sasany ny kazarana ezaka toy ireny, izingizinin'ny Dispatch Beirut fa tsy izany mihitsy no tiana hahatongavana:
Tsy ny hamafa ny fahatsiarovantsika ny ady akory no tanjonay fa ny mba tsy hiraviravy tànana ao anaty firenena iray niaritra ny mangidy.